Haddii deynka ay kugu leedahay hey’ad dowladeed | Kronofogden
Haddii ay deynka kugu leedahay hey’ad dowladeed ama degmo warqadda ugu horreysa ee aad naga heleysid waxay noqoneysaa ”Skuld att betala”.
Haddii ay deymanka kugu leeyihiin hey’ad dowladeed ama degmo nagama heleysid warqad ku aaddan ama lacag bixin. Warqadda ugu horreysa ee kuu imaaneysa waxaa lagu magacaabaa ”Skuld att betala”.
Maxay yihiin deymanka caadi ahaan ugu badan ee ay hey’adaha dowladdu dadka ku yeeshaan?
Waa kuwan dhowr tusaale oo ku aaddan deymanka sida caadiga ah ugu badan ee ay hey’adaha dowladdu dadka ku yeeshaan:
Deymanka canshuurta oo uu Skatteverket dadka ku yeesho
Deyman ay CSN-tu dadka ku yeelato. Waxay taasi tusaale ahaan ku saabsanaan kartaa in aad waxbarasho deyn ku qaadatay oo ay kugu adagtahay in aad deynki dib u soo celisid.
Macluumaad la xiriira:
Yaad lacagta u shubeysaa, goormeedsa shubeysaa?
Hey’adda dowladda, tusaale ahaan Skatteverket, wuxuu doonayaa in lacagta loo soo shubo sidaas darteed ayey dalab ku aaddan deynka noo keenayaan. Annaga Kronofogden ah ayaad lacagta noo soo shubeysaa. Taariikhda ugu dambeysa ee lacagta la dhiibayo waxaad ka heleysaa warqadda.
Ma u aragtaa in dalabku uu khalad yahay?
Haddii aad u aragtid in dalabku uu khalad yahay waxaad la xiriireysaa hey’adda dowladeed ee dooneysa in lacagta la siiyo. Laakin fiiro gaar ah u lahaw in xitaa haddii aad taas sameysid, ay khasab tahay in aad lacagta noo soo shubtid inta aan la gaarin taariikhda ugu dambeysa ee lacagta la bixinayo.
Maxaa dhacaya haddii aadan lacagta bixin?
Haddii aadan lacagta waqtigeeda ku bixin waxaan billaabeynaa baaritaan, kaasoo aan dhaqaalahaaga ku baareyno. Waxaan dabadeeda cabbir ka qaadaneynaa
Lacagaha mushuur kaa soo gala ama
Waxyaabo kale, waxaa taas loola jeedaa hantidaada.
Waxay taasi ka dhigantahay in aan lacag ka goosan karno mushaarkaaga ama iibin karno hantidaada, tusaale ahaan gaari ama guri bar-milkiyad/bostadsrätt, si deynka loogu dhiibo.